प्रदेश २ को चुनावमा कुन नेताहरुले कहाँबाट भोट खसाले ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रदेश २ को चुनावमा कुन नेताहरुले कहाँबाट भोट खसाले ?
काठमाडौ, असोज २ । स्थानीय तह तेस्रो चरणको चुनावअन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा चुनाव भइरहेको छ । आज विहान ७ बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचन साँझ ५ बजेसम्म जारी रहनेछ । आठ वटा जिल्लाका एक सय ३६ वटा स्थानीयतहमा आज मतदान कार्य भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा उत्साहपूर्वक स्थानीय तह चुनाव भइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकामा शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
तेस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएसँगै संविधानअनुसार देशभर स्थानीय सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गर्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस गृहमन्त्री निधिद्धारा गौतम हत्यामा भारतलाई ‘रिग्रेट गर्न आग्रह’
निर्वाचनमा कुने नेताले कहाँबाट मतदान गरे ?
माधव कुमार नेपाल : नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मतदान गर्न गौरको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । उनी बिहानै मतदान गर्न आफ्नो केन्द्र पुगेका थिए । नेता नेपालले राम जानकी कन्या प्राथमिक बिद्यालय गौरबाट पहिलो मतदाताको रुपमा मतदान गरेका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन अयोधि प्रसाद यादव : निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले बिहान ७ः०० बजे मतदान गरेका छन् । उनले सप्तरी सदरमुकामस्थित राजविराज नगरपालिकाको वडा नं २ आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा पुगी मतदान गरेका हुन् ।
राजेन्द्र महतो : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गृहजिल्ला सर्लाहीबाट भोट खसालेका छन् । श्री दुर्गा खोभारी जनता उच्च माविबाट मतदान गरेका छन् । बिहान करिव साढे सात बजे महतोले चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित निर्वाचन बुथ केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
राजपा नेपालका महासचिव मनीषकुमार सुमनले पनि सप्तरीबाट मतदान गरेका छन् । सुमनले राजविराजमा मतदान गरेका हुन् ।
विमलेन्द्र निधि : पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनकपुरको राजेश्वर निधि उच्च मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । केन्द्रमा पुगी विहान ८ बजे उनले मतदान गरेका हुन् । मतदानपछि उनले लामो समयपछि स्थानीय चुनामा मतदान गर्न पाउँदा खुसी भएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस उपप्रधानमन्त्री निधि र चीनिया रक्षामन्त्री चाङबीच भेटवार्ता
मातृका प्रसाद यादव : माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादवले धनुषाबाट मतदान गरेका छन् । जिल्लाको सबैलास्थित मतदान केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका हुन् ।
शरतसिंह भण्डारी : राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले महोत्तरीको औरहीबाट मतदान गरेका छन् । उनले औरही नगरपालिकाको औरही मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
ट्याग्स: bimalendra nidhi, Madhav Nepal